Swan: Ma filayo inay dhici karto kahor 8da febraayo doorashada labada aqal iyo tan M/weynaha… – Hagaag.com
Swan: Ma filayo inay dhici karto kahor 8da febraayo doorashada labada aqal iyo tan M/weynaha…
Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay James Swan oo shir jaraa’id ugaga hadlay xaalada siyaasada ee dalka Soomaaliya ayaa rajo ka muujiyay in la gaaro heshiis loo wada dhan yahay ee qabashada doorashada dalka Soomaaliya.
James Swan ayaa sheegay in uu la kulmay madaxda Dowlada Federalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ee dalka uuna kala hadlay sidii loo gaari lahaa heshiis dhinaca doorashooyinka dalka ah.
Mar uu ka hadlayay Ambassador James Swan ayaa sheegay suurtogalnimada inay doorashada dhacdo kahor 8da Febraayo ayuu ku jawaabay;
“Ma filayo in ay dhici karto kahor 8da Febraayo doorashada labada aqal iyo kan madaxweynaha sababtoo ah waa waqti aad u kooban, balse waxa aan rajeynayaa in la gaaro heshiis loo wada dhan yahay oo lagu qaban karo doorashada dalka.”
James Swan ayaa sidoo kale shirka jaraa’id lagu weydiiyay waxa dhici kara kadib 8da Febraayo haddii aysan dhicin doorashada.
“Baarlamanka Soomaaliya ayaa gaaray qaraar bishii oktobar ee sanadkii hore kaasoo ah in haddii uu waqtiga ka dhamaado baarlamaanka iyo madaxweynaha in ay xilka sii hayn doonaan illaa laga soo doorto baarlamaan iyo Madaxweyne cusub”ayuu yiri James Swan.